Ra’iisul Wasaaraha XFS oo kulan xog-waraysi ah la qaatay Ganacsatada Dalka+Sawirro | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Muqdisho; Axad, Feberaayo 03, 2019 –Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa xalay kulan xog-waraysi ah la qaatay ganacsatada Soomaaliyeed.
“Ganacsatadeennu waxa ay ku soo shaqeeyeen xilli adag, sidaa darteed waxaa mas’uuliyadi naga saaran tahay ilaalinta ganacsigooda. Xukuumaddu waxa ay diyaarineysaa dhammaan sharciyada damaanad qaadaya hor-tebinta shirkadaha waddaniga ah”, ayuu yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
Previous articleMaamulka Gobolka Banaadir oo meel mariyey Qorshe Howlleedka 2019+Sawirro
Next articleBarbarkeey ka baxdo waa Bakayle Qaleen